Uploaded by Zin Zae
Myanmar famous author , Taryar Min Wai's books
Active English Quizzes Collections Aug21
125 phrases in English
Active English-အင်္ဂလိပ်စာ လေ့လာလိုသူများအတွက်
ငန င တကက သသလ မမ အက္ခရမမ
Thursday, April 21, 2011 Labels: အင ငဗမဗ0comments
+“အပညပစ္စညန ဆဆဆ တ … နလညညိုဆ့ မလဆိဆ ခခ စရနနျတကနဖြစငယန” ဆဆဆ တကဆဆ ဘယယိုဆိမြငင သလလ ။
ပမက္ခဥသ လေမ အငန(ဥယမဥနခြခ ဌန)
မျနနတေဆဆ့  Post Modern World မမ အပညနလ့ပတတ ကငလ င အယယ အဆေိပငန စခိဆေိရယမ ကနပပနန တသလမကန
ရမဆပတယန၊ ကမ္ဘေကမ အပညသမတစနယေကန ကဆဆဆ ရငန သစင ငနျေတ၊ေိမ
တကျတ ကဆဆ ပလတတ တစစ လ့  ပတနပြပတယန။
နလညတ ရမလဆိဆ ပဘယ ။ ခခ စရခိဆ သကတ ကစလ့ ရပတယန။ တခြကမ္ဘေကမ အပညသမတစနယေကန ကေတ သလေိသငန ပြငန ပေါ်မမ
သလျေိတနလ့ပလိမြဆို့တစနမြဆို့ကဆဆ ထဆဆစနပြပတယန။ေိလတဆဆ ကင လ အ
င ခမမ တ အလ ဒသသလပနနပဆဟ တဖြညနဖညနျလငန ငပ
ိပြဆိုကမျသပတယန။ လရကနကြညန ရငုမသယျေိတကေိမ
မနနတလငအခ အလ ဒသိပျြကကကလ့ အမညည ဆုေိရမမြဆို့တေကြသ ပမကတသခငန
လဆိဆ့  သယ က ပရတနပြလဆဆ ကင တယန။ အလ ဒ မမဆိုကေမတလညန နလညညု ရမ ဆ မမမ ခခ စလဆိဆ့ ရမယန ငိပျြကကညမဆိုပ။ Multi Reality
ကဆဆ လကကခ ထတလင လကကဆ မေိခတနကြသ မမ အပညအယယ အဆျေတဟ
မမဆိုစခိဆရမဆပတယန။ မမဆိုစခိဆကဆဆ လကကခ ပတယန။
၁။ ဘယယိုဆ စအဆပနျေတကဆဆ ဆရအဓဆ က ဖတင သလလ ။
၂။ေိမဒန ညဗမဧ။ိန အစရတ ၊ ရဆ ပယက္ခဏ မညတ ဆု့ရမဆသညည ဆုရမငနလငန ပပ။
ေိမင ငကနမြတန [ပစန(ငယန)]
၁။ ဘယယိုဆ စအဆပုညဆ မဆဆဆ အဓဆ ကထဖတင တယန။ “စ” က အဓဆ ကမဟဆတတူ။ ဆငန ခြငန သခိဆသပငလ င ကဆဆယန ငရလ့ ဥဏည သ အဓဆ ကပ။
၂။ ဒသေိမပခနနကဆဆေိဖြမယယ ဆုရငန အရမနရမညယမျသပလဆ မငိည ယန။ ကမ္ဘေကမ ကေခမသညန တစနယေကည ဆုဂမနယယ စန တစနယေကည
“ဒသကျကကကလ့ အဓဆ ပ္ပယည ဘလလ ” လဆဆ့ မေခလင တကဆဆ ကေခမသညန ကိပြနနေိဖြပတယန။ “အလ ဒသလဆိဆ သ ပစမနနလ့
အျလယင ကယေိပြ
လဆိဆ့ ရရငန ကျနညတဆဆ့အပငင နနခခိပြသ ဘယန ကေိနမလလ ” တလင ။ ဒသေိမပခနနနလ့ ပတတ တငလ င ကျနနတေ
သေဘထကလညန အလ ဒသအတဆဆ ငန ပပလ ။ လျကယ တတပယနေိဖြဆဆဆ တယယ ဆု့မထငက ငန အရမနေိကမဇယတငည ပ။
တ န ဟသရသကဆဆေိပငင သညနဟဆေိဖ်ါပြထပသညန။ “ေိထလန ညနန့လနန့”
“ရသစပဧ။ိစဆ ဒနန ”ျတငန ဆနန့ကမငညကနဖြစတ ဥည
မမသညန ဟသရသ ငန ငမညတ ဆျု့ကခပသလလ ခငန ဗမ။ “ေိလမ ကဆဆမေလမ ၊ပင ယယည ဆုေိလမ မညန ” ဟယေိသ ဆရဧ။ိတ သညန
“ေိထလကနန့လနန့ ”ိဖြစနသေလညန ဟသရသ ကဆဆ မေပပ။
KTR (စဆဆ ကငမဆို )
၁။ “ေိလမ ကဆဆမေလမ ၊ ပင ယယည ဆုေိလမ မညန ” ဟယေိသစကလခိဆသညန ဟသရသဆသ သဆဆ့ ဥသ တညနသေ အလကမဟဆတင ။
Modern Sensibility အရေိရထသ အဖဖလ့ အ
့ တစညမဆိုဖစင သညန။
။ မသ တကယ ဆုေိတ နဂဆဆ တညနက ပယိပြငန လငနမြဆိုကငတယန။ အရကနသေကင တ ရင က ငလ ပဆိဆ ပယပတယန။ ဒပပလ ။ေိမဒန ညဗမ၊ေိမဒနနပညဆဆဆ တကေတေိဝဝဖနန့ကမကငတင လ င အဓဆ ပ္ပယည ဆုေိဆငင တယန။ *** +ဆရတရမငန ဝ ဆရရလ့ ကဗမမမအေပါ် ဆရဇဇအငကလ့  အဓဆ ပ္ပယက ငနမ လငန ခမကနေိဝဖနကမကန အေပါ် ဆရရလ့ အမြငန.. April 21. .။ -အငငဗဗ မတစကုမမ ကျနနတေ ပခလင ဖယ ပပသ ။ “ငဟ ... အရကညူလတလင မသ တကနလေပ” တလင ။ မသ တကယ ဆုတနဂဆဆ တညနက ယဆ မန့တတင လ င သေဘရမဆပတယန။ အရကညူနတလင မသ တကယ ဆုေိတ ဘယနလေကညမ ယဆ မနယဆဆ ငုယဆ ကည လလ .၂။ ပထမေိမမနနခမကတညန ဆရဇဂမသေိရသသ “ရသစပဧ။ိစ ဆ ဒနန” စအဆပန ငန င ပတတ တနနေပသညန။ လကကခ ငတ ရမမရဆ မသလဆဆ ၊ေျိေတဝ ငတရမမလညနရမဆေိနပသညန။ တစနနေ့နေ့မမ ကမမနတစနစေငန စေငနပြု ၍ေိပြသငန ငလမိမငနေိပြပမညန။ ဤေိနရမမ တ အကမယန မရမငနသပ။ ၃။ “ဆနန့ကမငညကနဖြစတ ဥန သညန ဟသရသကဆဆေိပငင သညန ” ဟယေိသအဆဆဆ ကဆဆ ကျနနတေ အေနငန င လကည ခခပ။ “အဂျြကငန မလင” ဆဆဆ လမိမင ယကည ခခိခြငန ဖစင သညန။ ၄။ေိထလကနန့လနန့ျေတမမု အလခိဆသညန လညန ဟသရသကဆဆ မေပပစမနငင ။ ဒသဘဆဆေိပဖယ သ ဥပမတစကုရမဆပသညန။ “ဘတန(စန) ကပ်ါမမ ခခိဆျေိတိဖြု တယဆုကယိမမ င တယယိုဆိဖြစည ညစညန” ၊ “ကပ်ါမမ လယ ပဆဆ ဆနန့မညန ။ ခခိဆလဆထဆဆ ငန သေပပ နျတ၊ေိယကျတက မဆ နနမကဆဆ ဥသ စပရေသိပြပ နျတ အတဆဆ ငန အတ တစကုထဆေိပြလျညတ င တညန ” သဆဆ့ သေ ထဆဆ အျေတသညန ဟသရသနမ ငန င မသကယ ဆုငင ။ ၅။ အျေတသညန အျေတဖစင သညန။ ရသသညန ရသဖြစင သညန။ *** အငငဗဗ မဂမနယန အမမ တန-၁၁၄ ၁၃၊ေိဖေဖဝရသ ၊၂၀၀၂။ မမ တမက ကန။ ။ အငငဗဗ မဂမနျယင ငနေိဖ ပခလင ဖယ သညန င ဆရတရမငန၀၏ အထကင အင ငဗမဗကဆဆ အသ မလည တဆငန မ ငေိပပဆဆ့ လသယ ကဆဆေိနမဆဆ ၀အေိကမဇယတငန ရမဆပသညန။ ကျနနတေ ငန င တကက သသလ မမ အက္ခရမမ (၂) Thursday. 2011 Labels: အင ငဗမဗ0comments +ဆရတရမငန ဝခငငမေိမဒန ညဗမ၊ဝတတိုမမကဆဆ မညတိုဆ့ သေျေိတလခိဆမမပ်ါမမ မယတညနပြသ ၊ ဘယယိုဆ ခခစေိရသခလင သလလ ဆဆဆတကဆဆ ဆရအေနနလ့ ဆရရခလငေိသ ကဗမ၊ဝတတိုတစငုဒန ဥပမပ၍ ရမငနပေပစလဆဆ ပသညက ငငမ.။ ကဗမတစငုဒုညဆ အဓဆ ပ္ပယက ငနမ လငန ရနန လဆဆ မလဆဆ ။ နဆမဆတငခိဆအယယ အဆမမကဆဆ ရမငနလငန ပရနန။ MODERN ကဗမတစငုဒန အနကန ဓဆ ပ္ပယန ပဖငန ငဆဆဆေိပ ရနန အဓဆ က ကမ /မကမေိဖြကြေိပစလဆဆ ပသညန။ အနကန ဓဆ ပ္ပယည အဓဆ ကကမသယလေိဖြကြပစလဆိဆ ပသညန ။ေိမဒန ညဗမလဆဆ့ သတည တင မ လ င စခ ခမဆနတခညနနမမရဆ မပသလ။ ရမဆခလငရငနေိဖြကြပပရနန။ .
. 2011 Labels: အင ငဗမဗ 1 comments +ဆရတရမငန ဝခငငမ “ကျနနတေ ငန ငနတတုရရဆ ပငု ” မမ “မယ လကစ၍ မယ လသဆဆ့ ပြနနရေကနခြငန ” ဟယေိသ အဓဆ ပ္ပယန ကဆဆ ရမငနလငန ပပခငငမ။ -“ေိတကင ယည မငန” လဆဆ့  တရဆ တယိုဆ အသချထကင လ င “တအဆိဆ ဝဒ” ရလ့ အယယ အဆပ။ အပည(Art) ကဆဆ ကျနနတေဆဆ့  .(မပြညန စင ခိဆေိပမယန င)အကမဥနပလဆဆ ကယိုဆ့ ရပတယန။ “ေိမဒန ညဗမျတ ကဆဆ အနကန ဓဆ ပ္ပျယည ငန ငဖဆဆ့ မလဆိဆ အပင ဘယ။နလညညဆု့မဟဆတတ လ ခခ စဖဆဆ့ သ ဥသ တညင တယန။ ကျနနတေဆဆ့ ရေသတငနပြခလင တလငေိဆငန ပျတဟ ကဗမရလ့အနကန ဓဆ ပ္ပယန ကဆဆ ပဖငငိယဆုရငန မဟဆတင ဘယ။ ကဗမဖတတူရလ့  ခခ စခမကယမနကြငန ကဆဆ ပဖငငိငပ။” ဒသေိလကန ပလေိဖြပရေစေတ။ *** +ဆရတရမငန ဝခငငမ .. .ေိမဒနနငန င ပဆဆ့ စနမေဒနနျကခခမကမည ကဆဆလညနေိဖြကြပပရနန။ ဇနညနဝငန မငန -ေိပြရရငန ဆခိဆပငည ယကမရမဆေိတပဘယ ။ “သရဆ ပည နမ ည မမ န ည နသရဆ ငလ င ပဏ တ နနတဆိဆ ငနေိဖ်ါကမဗတယန။” “ေိမဒန ည မယ လအတဆဆ ငန မဟဆတတ လ အခမဆိုဖမကန တငန ပြတယန ” “ပဆဆ့ စနမေဒန ည ဘသစက စညနမမဥနျတ ကဆဆ ပခမဆိုဖမကငယန ” အလ ဒသလဆဆ…. . April 21.။ျကငန ကအေရမကြသ ဘလေိဘလခိဆရကနနေတလငေိနရကဆဆ Positive Space၊ေိဘလခိဆမေရကင လ ငေိနရကဆဆ Negative Space လဆိဆ့  ဆဆဆ ကြပစဆဆ့ ။ Positive Space မမေိဘလခိဆနလ့အတယ ကစနရသယ က အေရကြသ သလဆဆ .ေိမဒနငနနခမသျတငန ဗလနယနဧ။ိန အသကနရေကညု ရမ ဆ မေိကြငန ဖတကု ဖမ ယ ပသညန။ေိမဒနတပ (ဝတတို၊ကဗမ)ျတငန “ဗလနယန ” ဧ။ိန အသကနရေကငခိဆကဆဆ ရမငနလငန ပပရနန ၊ အဆဆဆ ပ “ ဗလနယန ” ကဆဆ မညတ ဆု့သေနရမမျတငန အသခိဆပု သငန ငပသလလ ခငငမ။ -ေိဘလခိဆကနနကြသလဆဆေိပ . စမမကနပါ် မေရကယ ဆုကင ဘယ. Negative Space မမ ထလမမေိပြလနရယယေိနရသယ ကလညန အေရပ ပတယန။ေိဘလခိဆနလ့အတယ ကစတတညဆု့ လဆဆ သလဆိဆ ၊ေိဘလခိဆနလ့ပခပသ ကစတတညဆု့လညန လဆိဆ ပတယန။ ဗလနယန သသ အဆဆရသ (Blank Theory) နလ့ ပတတ တနပြသ ကျနနတေေိဆငန ပတစန ပဆဒန ရေဖယ ပတယန။ အေကြငန ကြငန ကြငန င . . . လကနရေမယ ကဆဆိပြနက မျတ့ရငန ပဆဆ့ ပေလဆိဆ ကငမယန။ ခကင ကေိမသယ အမညည ပလဆဆ့  ခငငမက ဘယတူလလ မသဆ ဘယ။ ဘယည ဆုပဆဆ့ေိပရမလလ မသဆ ဘယ။ *** အငငဗဗ မဂမနယန အမမ တန-၁၁၅ ၂၀၊ေိဖေဖဝရသ ၊၂၀၀၂။ မမ တမက ကန။ ။ အငငဗဗ မဂမနျယင ငနေိဖ ပခလင ဖယ သညန င ဆရတရမငန၀၏ အထကင အင ငဗမဗကဆဆ အသ မလည တဆငန မ ငေိပပဆဆ့ လသယ ကဆဆေိနမဆဆ ၀အေိကမဇယတငန ရမဆပသညန။ ကျနနတေ ငန င တကက သသလ မမ အက္ခရမမ (၃ ) Thursday. . .
အေရငနမမဆိုမမဆို ဖခလိမြငန နေရတ ဟ အလငန ရလ့လမ ညန ငစမမု ကဆဆလညန ကဆဆ ယည နလညက မယယိုဆ့ မြငညဆ ပတယန။ *** -ဆရတရမငနဝ အခမစုယဆ တကဆဆ ဆရဘယယိုဆ နလညင သလလ ဆရရငကုန ငတငသလ။ အခမစုယဆ တေိမဒန ယိုဆ့  ဆရသတည တင မ တလပပေပပ။ အခမစုညဆ အခမစ ယိုဆ့ ပလ နလညင တယန။ ရငကုနညဆလဆိဆ့  ပလ နလညင တယန။ ရငကုနညဆ လဆဆ့  မဆ နနမရျသပတယန။ေိမဒနနမြငစ လ့ေိပြ … ..စတငန လေငလခလင ကြတယယ ဆုပစဆဆ့ ။ ဆနန့ကမငပ န ည Anti-Art ဆဆဆ တ ထပညခေိပေါ်ပကယ ပတယန။ ခဆပဆဆ့ စနမေဒန ညလကဆဆေိရကနတေ ဗလပခိဆစခ (Empty form) သဆညဒသဂရသ အေရအသ(Zero Degree Writing) ၊ အပည မဟဆတင လ င အပည(Artless Art) စတျတထပညခေိပေါ်ပ ကယပတယန။ အကမယကငနမ ရငန အရမနရမညယမျသပလဆ မနမင ယန၊ေိဆငန ပတစငုဒန သသ သနန့ရေပမယန။ *** +ဆရတရမငန ဝခငငမ ၅၂၈ + ၁ = ? ကဆဆ လညန ရမငနလငနပပခငငမ။ -ေိနကင တပ။ ကျနနတေ ကဆဆေိမမယန အ င စ ကဆဆ ယတဆ တနဝငတ တလငေိကငေည လတစနယေကနေိယကည ဆျုသပကြညငိင လ။ အနညနနလ့သေလညနကငန အကြမနနညနနလ့သေလညနကငန သယိပြနနေိဖြရမငနပလဆ မငိည ယန။ *** +တရမငနဝအေပါ် ကဆဆေိရဘဆနနလယရလ့  အမြငန နလ့ ကဆဆေိရဘဆနနလယအေပါ် တရမငန ဝရလ့  အမြငန ။ မမ နမငလ မ ကဆဆ ယန က င ဆဆ ယည ဆုကြညန ရင သလဆိဆေိပ။ တယေိတတယ ပတယန။ ဒပမယန င “ဘကန ” လလလေိနတယန။ *** +ဆရတရမငန ဝခငငမေိလကျတငန အဖြဗေိရငန ငန င အနကနရေငငဆု့အနကန မညတ ညည ပဆဆ ၍ တနညဆုရမဆပသလလ ။ အကမဆိုအေကြငန ငန ငေိဖြဆဆဆေိပပရနနတေငန ဆဆဆအပင သညန။ -ကမ္ဘေပ်ါမမ လယိဖြဗ လယမညနပပ နကြသျထနတဆနနပပလ ။ ကျနနတေ အေနနလ့တေ လခိဆသဖဗ တလငသယ က လယိဖြဗ ၊ိနိမ လခိဆသမညနတလင လယ က လယ မညနလဆဆ့ ခခ ယယ ပတယန၊ ဒပမယန င အလ ဒကလညန စကအဖြစစ လ့ သပရတပ။ လခိဆသဆဆဆ တကေတ တစညမဆိုထလပပလ ။ အနကနရေငုညဆ အဖြဗေိရငကလ့  ဆနန့ကမင တကယိုဆ့ ယယ ဆေနကြတကလညန လလလ ပ တယန။ အဖြဗ ရလ့ ဆနန့ကမင တကည မဖြဗိခြငန ပပလ ။ေိနကင စကေိပြစရရမဆပသတယန။ ကျနနတေဆဆ့ျေတ . ဆဆိဆ ရငန တေ အခမစန = အ + ခမစန အ လဆဆ့  ခမစယ င န လဆိဆ့ ပလ ဆဆဆ ကြပစဆဆ့  ။ .
ေိခငန လငန လဆလ ထ ပတလငေိပခကဆဆ အမမဆိုကငုပငပနပေသလဆဆျလတယ ပပတျတခ်ါပြသ လဆပနဆေငန ခြငန ဟျလတယ ပပတ ရမင တနနခြငန တစကုလဆဆ့  ထငင တယန။ ( ဟဆတင သလ) -ဟဆတင ပ။ ခငငမလညန ကျနနတေ လဆဆ လယ မမဆို ဆဆဆ ရငန တစန နေ့ကြသ ပပဥသ မယန … ။ *** +ဆရတရမငန ဝ ဝတတိုတဆဆေိရဖဖလ့ ရျတငန မညတ ညန အ င ခမကမည လဆဆ အပတနညန (သဆဆ့ မဟဆတန) မညည လ သ င ဆဆ့ေိရဖဖလ့ ရသနညန။ -ကမ္ဘေကမစရဆရကြသ တစနယေကေညိပြဖယ ပတယန။ ၀တတိုတဆဆေိရဖဖလ့ ရ မမ အဓဆ က အေရကြသ တလင အခမကနကြသ သခိဆခမကကဆ တ မ ယင လ င … ဒပမယန င ခကင က အလ ဒသအခမကနကြသ သခိဆခမကညဆု ဘယတူမမ မသဆ ကြဘယ တလင … *** +ဆရတရမငန ဝခငငမ . အလ ဒသအခကန ခလျေိတကြ မမ ဝမနသမမုျေိတ တစက တေလျေိတ့တတင တယန။ အလ ဒသဝမနသမမုျေိတထလ မမ ဘဝမနသဝမနမကညု မျေိတက အေကငန ဆခိဆလလ လဆဆ့ . . April 21.. . . 2011 Labels: အင ငဗမဗ2comments +ဆရ စအဆပင စ နုပငလ က .အငငဗဗ မဂမနယန အမမ တန-၁၁၆ ၂၇၊ေိဖေဖဝရသ ၊၂၀၀၂။ မမ တမက ကန။ ။ အငငဗဗ မဂမနျယင ငနေိဖ ပခလင ဖယ သညန င ဆရတရမငန၀၏ အထကင အင ငဗမဗကဆဆ အသ မလည တဆငန မ ငေိပပဆဆ့ လသယ ကဆဆေိနမဆဆ ၀အေိကမဇယတငန ရမဆပသညန။ ကျနနတေ ငန င တကက သသလ မမ အက္ခရမမ (၄ ) Thursday. ဆရလယ ထဆစဆ နနဝငန ရလ့ “ လကည ကကညန ပခကင လ မမ မဆနုငဆ ငန မမ ” စအဆပုညဆ ဘယယိုဆ ထငင သလလ ။ -ကျနနတေ နလ့ အမြငညတယပဘယ ။ ဒပမယန င အလ ဒသစအဆပုညဆေိလလစစ ဖတင တယန။ကမ္ဘေကမစကတပစက နနကဆဆ ပလ ကဆဆ ကပသိပြနနေိပြလဆဆ ကင မယန။ “သယေိပြတကဆဆ ကျနနတေ သေဘမတယ ပဘယ ၊ ဒပမယန သ င ယ့ ရလ့ျလတယ ပပတ ပဆဆဆ ပခငန ငကဆဆ လညန ကျနနတေ အသကစ လ့  လလိပြသ ကျကယနပေ ပမယန။” *** +ဆရတရမငန ဝခငငမ လယ ဆဆဆ တ အခကန ခလျေိတကဆဆ ကြခိုျေိတ့ရတ ဓမ္မတပပလ ။ ဒပမယန င .
သဆ ခမငငတယန။ -လယ အမမဆိုမမဆို ၊ ဘဝ အျေေထျထ ရမဆကြေလေတ တစနယေကစ့ လ တစနယေကန တယ ငည ယညထငင ဘယ။ ဝမနမကညု မေ အပ်ါမမ နလညကခ ယယ ကြပခိဆခမငနလညန လကလ လလလ ငငတယန။ *** +ဆရတရမငန ဝ “ိပြဆိုငနမြငန တဆဆ့ရလ့  ပခသခ ” အျတကယ ရ ကဆဆေိကမဇယတငင တယန။ ဆရအျတကကုဏဏူပ တယန။ ဆရရလ့  အဂလဆ ပတေိလငလမမု အျေတ့အကြခို အေကြ ငနဟပပပ။ -အဂလဆ ပတေိလငလနညနျတကေတ အမမကြသ ရဆ မပတယန . ။ လယ သဆ နညနပသ ထဆေိရကည ယန င “နညန ” တစကုေိပြပပမယန။ ကဆဆ ယန ငကဆဆ ယည ဆု… . အဂလဆ ပ ယူမမဆျိုတကြ ထလမမေိရကနနေတယယ ဆု့ လဆပနကြညန ပင ။ တရထဆဆ င တလဆိဆ ထဆဆ ငက မမပ။ မဆ နစန၂၀ေိလကန စမနလဆပနကြညန ငပ။ အခမဆနနပေငက ငနေိပငေ တလကန လဆပဏူပ။ စဆ တညူထလ က အဂလဆ ပ ယူမမဆျိုတနလ့ရလ ရလတငန တငနေိရဖတနေိပြဆဆဆ ဆကယခေိနပ။ အခမဆနုငဆ တဆိဆ အျတငန မမ တဆဆ တကယ တကဆဆ ကြခို ဆခိဆရပလဆ မနမင ယန။ေိနကယခိဆ အဆ ပညကန မကက ငနတေငန အဂလဆ ပုယဆ မကယ ပလဆ မငိည ယန။ *** +ဆရတရမငန ဝေိထလကနန့လနန့ လဆပင တစက တ ခ ယိဆ ဒသအတဆဆ ငန ပလိဖြပစသ တ လ။ ဒမမ မဟဆတန ဘယန ခမဆနည တ မ ညငပိတပသလလ ။ -အတစ လ့  အတနေိမြမ ကကငန အေပငန ဖစငယညဟဆတယ ။ တစက တခေိတ တညနျင သ တတင တယန။ *** +ဆရတရမငန ဝ ဆရဇတနကေငန ဂမဆိုကနလ့ ဆရ ဘယတူပဆဆေိတပသလလ ။ -ထဆတနဝေသယ က ပဆဆေိတပတယန။ *** +ဆရတရမငန ဝ စပေလကထလ ကဆဆ ဝငန ရေကညဆု့ပစနန့စ တလငလယ တစနယေကန (သဆညကပစနန့ ဝငလယ ငလ င တစနယေ ကန )ကဆဆ ကဆဆ တရအေနနလ့ ဘယယိုဆိမြငင သလလ ။ဘယယ ဆုအပခမငငသလလ ။ -ကျနနတေ ရလ့ ကဗမစသတစငုဒနတဆဆငန ပပလ ။ “ေိလကမမ လေိပြ ကဆဆ ခမညနေိမမိမလငန င စရမလဆဆ ဘယ ၊ မဆနုငဆ ငန မမလညနအကတသ ဂမငင ပတယန ” ရမင တနန ပခငန အ င ပြညန ငရမဆပ တယန။ *** +ဆရမငနခကယ ယကငမင ဆကတ ပနျေတခ်ါမမု သညနေိနရတဆဆ ငနျတငန အသခိဆဝငင သလ ။ေိထလကနန့လနန့ေိဖြေပပရနန ပနန ကြပသညန။ . . .
-ခမစတရကငန တျတ ကြခို ခလငရဖယ ပတယန။ တရမငနခကယ ယယိုဆ့  ခငငမ ကျနနတေ ကဆဆ သခိဆနနတက သဆ ပန အလကမေိမြကင ဘယ။ တစနခြပဆဂလင စနယေကည ဆဆဆရငန ကြယည ငနဆပလဆ ပလ န ဆ ပနေိခြကယ ယန ကျနနတေ ကဆဆေိပပဆဆ့ ဖယ ပတယန။ သယ့ နမညည လညန “ဥကက ဝ” လဆဆ့  လကည တနရေထ မ ဆိဆ ထပတယန။ သယ့ ကဆဆ ကျနနတေ ဥကက ( ၆၀)ိပြနညပဆဆ့ငင ။ သယ့ အဆ မ ည အဆတကလျေိတကြ မမ ဘဆ လပနေိမြ လဆဆေိနရငန နညနနညနိဖြညငိနပေမယယ ဆု့ ကျနနတေ ပနနေိပြလဆဆ ကင တယန။ ဒသ ထကငဆိုပြသ ကျနနတေ ဘမမ မတတနငင ။ အမမ နနတေ ပရဆ သတယ ဆုတ စရဆရထကန ပဆဆေိတပတယန။ *** +Post Modernိဖြစည ဖြစုညဆ ဖနသ ငသ ယ က ရျညက ယငပခငန ငရမဆပ သလခငငမ။ -ရျညက ယတရ မလဆိဆ ပဘယ ။ိဖြစငလ သယ င က သယ ဟသယိဖြစင တယန။ *** +ေိကမကတငငုနနပ်ါက သဆညနလ့ ဗလစပရကနပေါ်ကသဆညဘျကပသလလ ။ ကျနနတေ ကေတေိကမကတငငုနနပ်ါကဆဆေိမြဖြဗ နလ့ရေပသ ဗလစပရကနပေါ်ကဆဆ ခလ ဖမကငတလင ခလ တခနလ့ရေထလဆဆိညိငတယန။ေိကမကတငငုနနပ်ါက သဆညအျတကယ ညနေိဘဖမကကဆ ပမ တယန။ +ေိမဒနနပည ပဆဆ့ စနမေဒနနပည မမနလ့ ကျနနတေဆဆ့ ကဆဆ မဆ တယကနပေပဆရ။ ခပနကြမနကြမနေိပြနကြပတယန။) (နမလညက ငနေိမဒနနဖြစငယယဆု့ *** ၁။ေိမဒနန ၊ပဆဆ့ စနမေဒနန အပညကဆဆ မဆ တယကနပေဖဆိဆ့ ဆဆဆ တ ကေတ အေတကဆဆ ကမယနပြနန့နေပတယန။ ဒသေိနရကေန အကမယနေိပြလဆဆ့ မရငငကဆဆ ပခငန ငလ တင ။ ၂။ပနနသသတစယခိဆကဆဆ ခငငမစလဆဆ ကင ယယ ဆုပစဆဆ့ ။ ခမဆိုရငကမဆိုမယန၊ ခမဥကငကမဥညယန၊ အလ ဒသအေပ်ါမမ ခငငမခခစဖဆိဆ့  လဆဆ တယန။ နလညညဆု့မလဆိဆ ဘယ။ နမလညတ လ ခခစရတလင အရျတေိလ ကမမ ရမဆပတယန။ ကြမနကြမနတမနတမနေိပြတယယ ဆုတကေတေိဝဖနနရေဆရျတရလ့  စကပဆိုငုယဆ ငညု မျေိတအေပ်ါမမ ဖဖလ့ တျညတ တ လညနိဖြစနငင တယန။ +ဆရတရမငန ဝေိမဒနန ၀တတို၊ကဗမကဆဆဖနသ ငသ ယ တစနယေကနဟ ဘျတလဆဆ အပင သလလ ။ ဘျတသဆ ထ သငန ငပသလလ ။ ဘအေကြငန ကဆဆဘယယိုဆ ခခ စပသ ၊ ဘယယိုဆ စ၊ ဘယယ ဆုဆခိဆ ဆဆဆ တကဆဆ ဘယယ ဆုသတည တင မ သလလ ဆရ။ -ဒပ နဆဆဆ ငက မပခနနတစကုရမဆပတယန။ “ေိရကဆဆ ဘယတူဈေတ့သလလ ၊င တ မဟဆတတူ” တလင ။ေိရထလ မမနတလင ငကေိရအေကြငန ကဆဆမသဆ ဘယ ဆဆဆ တသဘဝကမပတယန။ သယ ကလညနေိလကတစကုအေနနလ့ကမင ယညင ကဆဆ ၊ အလ ဒသငနလ့ရေလဆဆ ပပလ … ကျနနတေဆဆ့ေိလကသျတကလညနေိလက ကဆဆ စတငိ တဆ မြင တူျေိတဟဆတက လ့ လ ၊ေိလကထလ မမ ရမင တနနနေပမယငိနေိလကအေကြငန ရ တကယတ ဆ ကြရလ့ လ။ အလ ဒသလဆဆဒပ နမမဆိုကဆဆ အေိခြခခိပြသေိမဒနနပညပေါ်ပကယ ပတယန။ Law of uncertainly လဆဆ့ေိခ်ါတလင မေရရမမုျေိတ ၊ နလညက ခကညု မျေိတနလ့အဆခိဆအစမလင တလငေိနရတစကုမမ ကဆဆ ယည အစကေနိပြကင စကုအေနနလိ့ဖြတငဆုငန လကည တည မ ရဆ မဘလ ရမင တနနနေရမမု . . အလ ဒျတေိပ်ါအေိခြခခိပြသေိမဒနနပညပေါ်ပကယ ပတယန။ိမြနညလဆဆ စအဆပတ တမနျတ ရမဆပတယန။ ဖတနကြညန ငေိစလဆိဆ ပတယန။ အလ ဒထကငဆိုပြသေိမဒနနပညျတကဆဆ . .
စဆ မန ငဝငကခ စကြညငိနစေလဆဆ ပတယန။ ကဆဆ ယန ဘ င သကဆဆ ယန အလဆဆ လဆိဆ သဆလမမ ပ။ ဒဟ တကယန ငေိစတနျတနလ့ေိပြ ပတလင အကြခေိပစကပ။ *** အငငဗဗ မဂမနယန အမမ တန-၁၁၇ ၆၊မတန၊၂၀၀၂။ မမ တမက ကန။ ။ အငငဗဗ မဂမနျယင ငနေိဖ ပခလင ဖယ သညန င ဆရတရမငန၀၏ အထကင အင ငဗမဗကဆဆ အသ မလည တဆငန မ ငေိပပဆဆ့ လသယ ကဆဆေိနမဆဆ ၀အေိကမဇယတငန ရမဆပသညန။ .
More From Zin Zae